Nkpughepu nke anyanwu nwere ike ime ka isi nkwọ | Etu Ntutu Eke & Ntutu isi
Anyanwụ dị mma maka ntutu mana oke dị njọ. Chọta Ọdọ Ahụ! Anyị niile maara na ìhè anyanwụ nwere ike itinye aka na ọtụtụ uru ahụike dịka inye anụ ahụ vitamin D dị mkpa yana ọtụtụ ọmụmụ achọpụtala anyị na anyanwụ na-enyere anyị aka inye ahụ anyị nri ndị dị mkpa iji nọgide na-enwe oge uto ntutu kwesịrị ekwesị. Isi
Anyanwụ dị mma maka ntutu mana oke dị njọ. Chọta Ọdọ Ahụ!
Anyị niile maara na ìhè anyanwụ nwere ike itinye aka na ọtụtụ uru ahụike dịka inye anụ ahụ vitamin D dị mkpa yana ọtụtụ ọmụmụ achọpụtala anyị na anyanwụ na-enyere anyị aka inye ahụ anyị nri ndị dị mkpa iji nọgide na-enwe oge uto ntutu kwesịrị ekwesị. Ọzọkwa, ụfọdụ ọmụmụ na-ekwupụtakwa na enweghi ntutu isi nwekwara ike ịkpata ụkọ vitamin D. Yabụ jide n'aka na ị na-enweta ìhè anyanwụ zuru ezu!
Ma Ole Ka Ego Di?
Ihe dị ka nkeji 15 ruo 30 kwa ụbọchị zuru ezu iji mee ka ntutu gị dị mma kwalite uto ntutu. Ogologo oge ọ bụla, ikpachapụ ìhè anyanwụ n’ego gị n’iru nwere ike imebi nnukwu oge n’oge anwụ dị ike (11am ruo 4pm). Oge kachasị mma iji nwude anyanwụ bụ mgbe 4pm gasịrị.
Kedu ihe kpatara anwụ ji emebi ntutu?
Isi ntutu gị na ntutu gị bụ akụkụ nke ntutu gị nke na-esite n’ahụ gị pụọ na ntutu gị. Ìhè ụbọchị nwere ike imebi protein gị na ntutu, nwere ike belata vitamin E na C site na anụ ahụ gị na maka akụkụ ka ukwuu nke mmanụ na - esi mmiri. Nsonaazụ ya bụ: ntutu isi na-esighi ike na ntutu dị nkọ karịa. Anyanwụ nwekwara ike iwepu iru mmiri na ntutu gị, na-eme ka ọ kpọnwụọ, frizzier na ihe na-adịghị mma n'elu.
Ọ bụrụ na ntutu gị na-adịkarị nkọ, ị na-amụba ohere dị ukwuu nke ịmị ọkụ site na anyanwụ. Igosiputa oke anyanwụ nwere ike imetụta uto ntutu. Ihe ojoo obula ma obu ihe ojoo nye gi isi gi nwere ike ime ka ntutu gi karie.
Ndụmọdụ iji mee ka ntutu dị mma n’oge ịsa anyanwụ
Zere nnu ma ọ bụ mmiri chlorinated, ọ bụghị naanị na ọ nwere ike ijupu ma mechaa ntutu gị mana ọ nwere ike kpoo isi gị mgbe emechara.
Mee ka ntutu gị dị mmiri mmiri ma nwee mmiri nke ọma. Nke ahụ pụtara, mgbe ọ bụla otu oge ka ị gụrụ mmiri mmiri na ya. Ọbụghị naanị nke a, ị ga-eme onwe gị mmiri nke ọma ma drinkụọ nnukwu mmiri.
Yiri okpu ma ọ bụ tinye akwa n'isi gị iji chebe anyanwụ.
Etinyela Sunscreen na ntutu gị. Ọ bụ ezie na enweghị ihe akaebe na ịchafụ anwụ nwere ike imebi ntutu gị, enwere ọtụtụ ngwaahịa dị na ya maka nchebe anwụ na ọtụtụ n'ime ha na-eji ihe dị iche iche dị iche iche nke na-adịghị ahụkarị ma ọ bụ naanị oge ga-ekwu ma ha dị ize ndụ maka isi ala ma ọ bụ.
Anyanwụ ezughi oke?
Ọ bụrụ n’anyanwụghị nke ọma, ị ga-enwe ụkọ vitamin D. Ọtụtụ nnyocha egosila na enweghị vitamin D ahụ anyị nwere ike ime ka ndị mmadụ na-eto ngwa ngwa. Otu ọrụ vitamin D na-eme na-enyere aka ịzụlite ntutu ọhụrụ site n'ịzụlite ntutu isi. N'oge a na-enweghị vitamin D zuru ezu na sistemụ gị, enwere ike ịkwụsị mmepe ntutu ọhụrụ.
Ihe kpatara enweghi vitamin D na sisitemu gi gunyere itinye otutu oge n’ime ulo, iyi akwa ihie mmiri, na / ma obu iri nri nke nri di nkpa.
Etu esi enweta vitamin D nke ichoro
Zọ kachasị mma iji nweta vitamin D na-enweghị anyanwụ bụ site na mgbakwunye vitamin D, nri ọka na n'ezie nri bara ụba na vitamin D. E nwere ụfọdụ nri dị mma maka ntutu na ndammana na nri. Salmọn, mmanụ azụ na abụba abụba bụ nnukwu isi mmalite. Younwekwara ike iri nri nri na vitamin D, nke dịka ọka na miliki.
ntutu isiimebi ntutuntutu isintutu isianwụ emebi ntutuụkọ vitamin d